Elon Musk oo ka tirsan SNL wuxuu ka hadlayaa Dogecoin, oo digaaguna wuu burburay (Maajo 8, 2021) - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Elon Musk oo ka tirsan SNL wuxuu ka hadlayaa Dogecoin, oo digaaguna wuu burburay (Maajo 8, 2021)
Tag: Dogecoin, Eeloon Miski
Elon Musk, oo ah agaasimaha shirkadda Tesla iyo SpaceX, waa laba xaqiiqo oo guuleysatay xilligeenna tiknoolajiyadda, wuxuu ahaa wada-shaqeeye (soo-jeediye) dhacdada riwaayaddii caanka ahayd ee Mareykanka ee Sabtida Habeenkii. Dhacdadu waxay soo baxday fiidkii May 8, 5.30 am waqtiga Talyaaniga.
Elon Musk iyo hooyo Maye Musk
Sida iska cad, taageere weyn, wuxuu ku dhawaaqay maalmihii la soo dhaafay in wuxuu kaloo ka hadli lahaa Dogecoin, meme kasta oo uu jecel yahay meme. Qof walbana wuxuu u maleeyey that 🚀
Taabadalkeed, jaantusku waa bilaa naxariis: Qiimaha Dogecoin wuxuu bilaabay inuu hoos udhaco isla marka uu halku dhiggeedu dhammaado, oo leh candelona casaan wanaagsan, kana socota $ 0,66 illaa $ 0,53 saacaddii.
Qiimaha Dogecoin, waqtiga 1h
Intii lagu jiray mid ka mid ah qaybaha ugu caansan bandhigga, halyeeyga 'Weekend Update' taariikh ahaan waxaa martigaliyay jilayaasha quraafaadka ah sida Norm McDonald, Musk wuxuu isu baray inuu yahay saynisyahan maaliyadeed oo aan muuqan, Lloyd Ostertag, waxaana la weydiistay inuu si sax ah u sharaxo waxa ay tahay Dogecoin.
"Mahadsanid Michael, iigu yeedh Dogefather," Musk ayaa u sheegay Michael Che.
"(Dogecoin) wuxuu ku bilaabmay kaftan ku saleysan internetka, laakiin hadda si dhab ah ayaa loo qaaday," ayuu yiri Musk.
Yaa markaa si isdaba joog ah u weydiiyay Musk waxa dhabta ah ee uu ahaa, isaga oo jeebkiisa kala soo baxayay lacag doollar ah isla markaana u hoos mariyay sanka hoostiisa, xitaa isaga oo waydiinaya haddii cryptocurrency uu dhab yahay.
"Waa wax dhab ah sida lacagtaas," ayuu yiri Musk.
Colin Jost wuxuu ku booday ficil, xitaa weydiinta waxa Dogecoin dhab ahaantii ahaa.
"Waa mustaqbalka lacagta, waa gaari maaliyadeed oo aan la joojin karin oo adduunka la wareegi doona," ayuu yiri Musk.
Oo markuu sharraxay in cryptocurrencies lagu beddeli karo lacag, Che wuxuu yidhi, "Oh, waa buuq." (waa xasuuq!)
"Haa, waa buuq," ayuu yidhi Miski qoslaya intuu ku qaylinayay "dayaxa!" (Dayaxa! 🚀)
Ma rabtaa inaad daawato fiidiyowga? Halkan waa:
waa kan goos gooska musk oo sharaxaya waxa doge coin uu ku yaalo SNL he .waxay tiri waa buuq 😂 pic.twitter.com/iyXbKH0FPZ
ffaDayaanna ( Waxaa laga yaabaa 9, 2021